Maamulka Oslo oo arrimahan raba inay sameeyaan. - NorSom News
Maamulka Oslo oo arrimahan raba inay sameeyaan.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Oslo Raymond Johansen oo maanta shir jaraa´id qabtay, ayaa soo bandhigay qorshe hordhac ah oo maamulka magaaladu uu rabo in looga hortago faafitaanka xanuunka covid-19 oo maalmahan Oslo kusoo badanayay. Isaga oo sheegay in maamulka magaaladu ay aad uga wel-welsanyihiin tirada sii kordheysa iyo feejignaan la´aanta dadka magaalada kunool qaarkood.
Reymond ayaa sheegay inay magaalada kusoo noqdeen dad badan oo fasaxyo u aaday wadamada dibadda ah, sidoo kale ay magaalada kusoo guureen boqolaal ardey ah oo sanadkan bilaabayo jaamacadaha Oslo. Taas oo keentay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaaladu, uu kor u kacay, arintaasna ay wadato halis ah inuu xanuunku magaalada faafo.
Wuxuuna dowlada dhexe ka codsaday inay dadweynaha ay kula taliso xirashada marada afka lagu xirto, gaar ahaan marka lagu suganyahay goobaha dadweynaha ama gaadiidka dadweynaha. Isaga oo sheegay in maamulka Oslo aysan xiligan rabin in marada afka lagu xirto, ay waajib ka dhigto, balse go´aankaas uu yahay mid ku haboon inuu ka imaado dowlada dhexe. Wuxuuna cadeeyay in dowladu ay dadka u qeybiso maryaha afka lagu xirto oo lacag la aan ah.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Oslo ayaa sheegay in la mamnuucay in khamri lagu cabo goobaha dadweynaha ay isugu imaadaan iyo meelaha lagu nasto, si looga hortago in xanuunku uu si fudud u faafo. Isaga oo raaciyay in degmadu ay ilaalo geyn doonto goobaha lagu nasto, si looga ilaaliyo inaan khamri lagu cabin. Hadii la qabto qof khamri ku cabayana lagu ganaaxi doono 2.500 kr.
Dhanka kale wuxuu sheegay in la kordhin doono awooda shaqaalaha caafimaadka ee magaalada, si qof walba oo iska shakiya uu u qaato baaritaanka xanuunka Corona-virus.
Xigasho/kilde: Ønsker anbefaling om munnbind.
Previous articleTrump oo lala cararay kaddib markii qof lagu toogtay meel u dhow Aqalka Cad.
Next articleIlhaan Cumar oo mar kale ku guuleysatay kursiga xisbigeeda ee Aqalka Wakiillada.